कोस्टा डोराडा - तपाइँको अर्को छुट्टीमा के हेर्ने र के गर्ने यात्रा समाचार
कोस्टा डोराडाको साथ हिड्ने: के हेर्ने र के गर्ने
सुसाना Godoy | | पर्यटन गन्तव्यहरू
के तपाइँ कोस्टा डोराडाको साथमा हिड्न चाहानुहुन्छ? यो स्पेनिश भूगोलको एक सब भन्दा राम्रो परिचित क्षेत्र हो र सबैभन्दा चाखलाग्दो मध्ये एक हो। यो बार्सिलोनाको दक्षिणपश्चिममा अवस्थित छ र यहाँ अनन्त तटहरू साथै रिसोर्टहरू छन् जसले यसलाई अझ रोचक बनाउँदछ, यदि सम्भव भए भने।
तर यो सत्य हो यो क्षेत्र समुद्री तट भन्दा धेरै बढी छ र यसैले, सांस्कृतिक मार्ग, कथाहरू र पौराणिक कथाले भरिएको, पनि तानिन्छ उसको बारेमा। त्यसकारण, तपाईंले भ्रमण गर्न सक्ने सबै कुरा र तपाईं छुट्टीमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हराउनुहुन्न। तपाईं यो सबै आफ्नो औंलाको टोकरीमा हुनेछ! के तपाईं यसबाट आनन्द लिन तयार हुनुहुन्छ?
1 तार्रागोना, कोस्टा डोराडामा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सुरूवात पोइन्टहरू मध्ये एक
2 यसको समुद्री तट साथ पैदल
3 रिसोर्ट वा क्याम्पि??
4 सालो थीम पार्कको भ्रमण
5 रियसमा गौडीको जीवन
6 हामी Cistercian मार्ग संग जान्छौं!
7 एब्रो डेल्टा नेभिगेट गर्नुहोस्
तार्रागोना, कोस्टा डोराडामा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सुरूवात पोइन्टहरू मध्ये एक
कोस्टा डोराडाले कवर गरेका धेरै क्षेत्रहरू छन्, तर कुनै श doubt्का बिना, तार्रागोना पहिलो स्थान लिन्छ। हामी उनको बारेमा भन्न सक्छौं यो खुला-एयर संग्रहालय जस्तो देखिन्छ, यसले हामीलाई तारकको तथाकथित भग्नावशेषमा देखाउनको लागि सबै चीजलाई धन्यवाद दिन्छ।। हामी ब्रिजहरू पत्ता लगाउन केही समय पछि फिर्ता लिन्छौं, सिपिओज जस्तो टावरहरू र यसको पुरानो पर्खाल, जुन रोमन समयमा पछाडि जान नपरोस्। यी सबै महत्त्वपूर्ण रित्तिकहरूको साथ सब भन्दा महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक साइटहरू मध्ये एक हो, जुन ज्ञात हुनुपर्दछ। यसका अतिरिक्त तपाई सान्ता टेक्लाको क्याथेड्रल, मिरादोर डेल मेडिटरिने वा पोर्टको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्न।
यसको समुद्री तट साथ पैदल
हामी समय मा यात्रा को लागी वर्तमान मा फर्कन र यसको सबै तटहरु पत्ता लगाउन गए। किनकि यो त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँ बालुवा सँधै सँधै रहन्छ, ती क्रिस्टलीय पानीहरूसँग मिल्दछ जुन उनीहरूलाई धेरै प्रेम हुन्छ। ला पाइनेडा एक उत्तम समुद्र तट हो, दुई किलोमिटर भन्दा लामो जहाँ तपाईं सर्फिंग र डाइभि practice अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। काला फोंडा, जसलाई वैकिकी पनि भनिन्छ, तार्रागोनाको उत्तरमा अवस्थित रहेको छ र शान्तमध्ये एक हो। जबकि सान्तेस क्रियस बीच, जहाँ यसको दृश्यहरू र समुद्रको प्रतिबिम्बले तपाईंलाई प्रभावित पार्दछ। एक दिनको लागि बाहिर परिवार र पाइन जंगलले घेरिएको क्याप रोइग बीच हो।
रिसोर्ट वा क्याम्पि??
एक यात्रा को साहसिक कहिलेकाँही हामीले खोजेको आवासबाट सुरु हुन्छ। किनकि यदि हामीले यस ठाउँ बनाउने समुद्री किनारहरूबारे कुरा गर्यौं भने रिसोर्टहरू विस्तृत विवरणका साथ नायकहरू हुनेछन्। तर यदि तपाईं केहि अधिक आर्थिक, व्यावहारिक र सम्पूर्ण परिवारको लागि हेर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं पनि छनौट गर्न सक्नुहुन्छ क्याम्पिंग कोस्टा डोराडा। यस तरिकाले तपाईं जहिले पनि शान्त वातावरणमा हुनुहुनेछ र निस्सन्देह, तपाईं ग्रामीण इलाका र समुद्री किनारमा रमाईलो गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईं यसलाई हातमा सबै सेवाहरूको साथ महसुस गर्नुहुन्छ।
सालो थीम पार्कको भ्रमण
किनकि समुद्र तट र धेरै पर्यटनको अतिरिक्त सालोसँग पनि छ PortAventura वर्ल्ड थिम पार्क। त्यसोभए यो अनिवार्य भ्रमणहरूबाहेक अरू कुरा पनि हुन सक्छ, विशेष गरी यदि तपाईं आफ्ना बच्चाहरूको साथ जानुहुन्छ। किनभने यस तरीकाले तपाईं परिवारको रूपमा सबै आकर्षणको मजा लिन सक्नुहुनेछ र उनीहरूको लागि यो प्रोत्साहनजनक हुनेछ। अवश्य पनि, सालोले तपाईंलाई तोरे भेला किल्ला जस्तो विशेष ठाउँहरू प्रदान गर्दछ, यदि तपाईं स्थानको अधिक सांस्कृतिक भागको आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने।
रियसमा गौडीको जीवन
न त तपाईं र्युसको पैदल हिर्काउन सक्नुहुनेछ, किनकि यो गौड्को पालना हो र ती सबै समावेश छ। धेरै वर्षदेखि उहाँ यस क्षेत्रमा बस्नुहुन्थ्यो र आज यो कलाकारको एक महान सम्झना हो, यसको प्रत्येक कुनामा। तपाईं आफ्नो घरको साथसाथै रमाउन सक्नुहुनेछ, र गौडा सेन्टर, जुन व्याख्या केन्द्र हो जुन प्लाजा डेल आयुन्टमिएन्टोमा अवस्थित छ। यसमा, तपाईं कलाकारको व्यक्तिगत वस्तुहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ र साथै, त्यहाँ एउटा कोठा छ जुन उहाँको कामको प्रतिक्रियाहरू सहित छ।
हामी Cistercian मार्ग संग जान्छौं!
यो एक मार्ग हो जुन तपाईं या त पैदल वा साइकल द्वारा गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईंलाई अधिक लाग्छ। यो मार्गमा तपाईसँग छ तीन अनिवार्य स्टपहरू जुन तीन मठहरू हुन्: भल्लबोना, पोब्लेट र सान्तेस क्रियस। यसको वास्तुकलाको सम्पत्ती पत्ता लगाउन उत्तम क्षेत्र भन्दा बढी जुन स्पष्ट छ, तर ग्यास्ट्रोनोमी र निश्चित रूपमा शिल्पहरूमा पनि। तसर्थ, यो ती विकल्पहरू मध्ये एक हो कि जब हामी कोस्टा डोराडा भ्रमण गर्दछौं, हाम्रो यात्रामा पनि छन्।
एब्रो डेल्टा नेभिगेट गर्नुहोस्
डेल्टा डेल एब्रो पार्कको भ्रमण गर्नु आधारभूत पोइन्ट्स हो विचार गर्न। त्यसबाट तपाईं पशुहरूको असंख्य प्रजातिहरू फेला पार्नुहुनेछ। तर पनि, यसले तपाईंलाई अर्को सुखद अनुभव प्रदान गर्दछ जुन तपाईंले आनन्द उठाउन सक्नुहुनेछ र आफ्नो सबै जीवन सम्झन सक्नुहुनेछ: एब्रो डेल्टा हुँदै डु boat्गा यात्रा। त्यो कस्तो राम्रो जस्तो लाग्छ? ठीक छ, तपाईं एक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नदीहरूको मुखमा पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ, प्रकृति र यसको समुद्र तटहरूको आनन्द लिई। तपाईसँग रुटहरू छन् जुन एक घण्टाको आसपास हुन्छ, लगभग एक दिन सम्म। कुन क्षेत्र मा तपाइँ तपाइँको छुट्टी शुरू गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » पर्यटन गन्तव्यहरू » कोस्टा डोराडाको साथ हिड्ने: के हेर्ने र के गर्ने